Ukukhanya kweTreyini, iHitch Lock Factory e-China-Goldy
Ikhithi yokuKhanya kweTreyini ye-LED
Ukukhanya kweMagnetic Towing
Ukucaciswa kwe-LED / iLampu yokuMakisha ecaleni
Ukuqhuba kweNdlela yokubonisa
Bopha itshixa kunye neKhonkco yokutshixa / iPin
Isitayile seTrailer seHitch yeHitch eyiHele
Bent Pin Style Trailer Bopha Umamkeli Lock
Isitayile se-Dogbone seTrailer Hitch Reiver Locker
Bopha Pin & Umboniso
Itreyila / iHitch / Isixhobo sokuthambisa
Bopha iqhina / isiqinisi sokungqinisisi
I-Wheel Bearing Protector Kit / iBuddy
101001 12V Submersible LED Trailer Umsila Light K ...
I-101002 12V iProfayili ephantsi yoXande engaphantsi ...
I-101506 Trailer Light Magnetic Towing Light Kit
11101 5/8 intshi Swivel iNtloko Chrome Trailer Bopha ...
11102 Stainless 5/8 intshi Trailer Bopha Re ...
11208 5/8 Inch Black Dogbone Uhlobo Trailer Hitc ...
11305 5/8 Inch Black Trailer Bopha umfumani Ben ...
11410 1/4 Inch Black Trailer Hitch Coupler Tshixa
102007W Heavy Duty koqiniso irabha Coate ...
102054 Heavy Duty Bophelela uqinisa Anti-Rattle Stabi ...
13178 Ivili Ukunikela Buddy Mkhuseli Kit For Tra ...
Gcina unikezela ngowona mgangatho uphezulu kunye neendidi ezahlukeneyo zezibane zetreyila kunye nezixhobo zeenqwelwana, iilori, iRV njl.
HITCH Lock / Cocker Lock kunye nePIN
Gxila ekuphuhliseni nasekwenzeni iiklasikhi / izikhonkwane zeklasikhi kunye nezintsha kunye nezitshixo zokuhlanganisa / izikhonkwane
Kuquka ii-hitch tighteners ezikumgangatho ophezulu kunye neeplagi zokufumana, njl njl.
Kubandakanywa izixhobo zokukhusela ivili kunye nokufika okutsha kuyeza kungekudala.
Iminyaka engama-20 yamava
Kangangamashumi amabini eminyaka, sizinikezele kwizibane zetreyila, izitshixo zekharavani kunye nezixhobo.
Ukubonelela abaThengi abaKhulu kwihlabathi liphela
Sijolise ikakhulu kuMntla Melika kwaye siye saba ngumthengisi wexesha elide weenkampani ezinkulu ezinje nge: Resse, Curt, Trimax, Blazer, Hopkins njl.
Sizibandakanya ekuboneleleni ngeyona mveliso inokhuphiswano kunye nokuhambisa ngenqanawe ngexesha, ngenkxaso yabathengi yeprimiyamu ngaphambili, ngexesha nasemva kwentengiso ngeqela elizinikeleyo
Nceda uqhagamshelane nathi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24.
Nge-31 ka-Agasti 2020
Isiciko seHitch Cover esitsha
I-102005B 2 Inch Trailer Hitch Cover Plug Cap sisigqubuthelo sethu esitsha. Ulungelelwaniso lwendalo iphela. Ixesha elide lobomi kunye noyilo oluhlaziyiweyo. Uthintelo olusebenzayo nolokwenyani. Kulula kakhulu ukuyifaka.
Umbutho wabathengisi beenqwelomoya i-NATDA-North American
Umbutho wabathengisi beenqwelomoya eMntla Melika ngumbutho wezeshishini oqeqeshiweyo eMntla Melika osebenzela abathengisi abakhanyayo nabasebenza ngokuphakathi kwaye ubadibanise njengeqela elimanyeneyo. Iminyaka, imboni yeetreyila isokola nzima kwaye ilinde ngomonde ukufumana imali ...
Nge-Agasti 17, 2020
Izibonelelo zensimbi engenasici
Insimbi engenasici isisinyithi sekhabhoni esine-chromium kwi-10% okanye nangaphezulu ngobunzima. Olu longezo lwe-chromium olunika isinyithi izinto zalo ezizodwa ezingenanto, umhlwa oxhathisa iipropathi. Ukuba konakele ngomatshini okanye ngemichiza, le filimu iyaziphilisa, ukuba ioksijini, ...
Ukhetho oluLungileyo lweMakethi yokuKhombisa kwiDrayivu
Iimpawu zokumakishwa kwendlela yokuqhuba zizixhobo ezinceda ukuba umntu aqhube kwindawo yokupaka iimoto ngokufanelekileyo kunye nokuthintela ukungqubana okunjengokubetha ucango. Ezi zibonakalisi ziluncedo ngakumbi xa indawo okanye indlela emnyama ifikile (enje ngokuhlwa kunye / okanye xa i ...
Nge-3 ka-Agasti 2020
Zibaluleke kangakanani iZitshixo zeHitch!
Ukuhamba netreyila kukhululekile kwaye ii-hitches zinokukunceda kakhulu. Nangona kunjalo, i-trailer inokuba yinto ekujolise kuyo kubusela obude nokuba buqhotyoshelwe okanye buhlukanisiwe kwisithuthi sakho. Ke ngoko, ukhuseleko kwezithuthi kunye noqiniseko lubaluleke ngokwenene kwaye kufuneka lukhuseleke kakuhle. Nantsi ilokhi yehiphu iza ngaphambi kokuba ...
Igolide, uphawu oluthembekileyo kwitreyini yokukhanya / yokutshixa ishishini ngaphezulu kweminyaka engama-20 yoyilo oluqinisekisiweyo kunye nemigangatho engqongqo yeshishini.Namhlanje, sihamba kwindlela yokuba zezona zibane zirhuqwayo kunye nomthengisi okhiye e-China.
I-NINGBO GOLDY YAMAZWE NGOKUQHELEKILEYO YORHWEBO CO., LTD
# 818 Aiyimei Isakhiwo No. 756 Tiantong South Road Yinzhou District, Ningbo, China 315199